Dadkii ugu badnaa oo Sweden soo galay, isagana guuray! | Somaliska
Sanadkii tagay ee 2015 ayaa Sweden waxaa isaga guuray dadkii ugu badnaa taariikhda wadanka ilaa sanadkii 1850. Dadka isaga guuray Sweden ayaa u haajiray wadamo kala duwan, iyagoo isugu jira Swedish ku dhashay wadanka iyo dad ka soo jeeda wadamo kale oo ama ku laabtay wadankoodii ama u guuray wadan kale.
Waxaa guud ahaan wadanka isaga guuray 51,237 qof sanadkii la soo dhaafay. Dadkaas ayaa u guuray wadamo ay ku jiraan Maraykanka, UK, Talyaaniga iyo kuwo kale sida ay shaacisay hay’ada tirokoobka Sweden (SCB). Qaar kale ayaa ku laabtay wadamadoodii. Sababaha ay dadkaan uga guureen Sweden ayaan lagu sheegin warbixinta.
Si kastaba ha ahaatee, dadka Sweden soo galay sanadkii hore ayaa aad uga badan kuwa ka guuray. Guud ahaan waxaa Sweden iska dhiibay sanadkii tagay dad gaaraya 163,000 qof kuwaasoo ay ku jiraan 35 400 qof oo isku dhiibtay caruur ahaan. Guud ahaan dadkii is dhiibay iyo kuwa ku soo galay ardaynimo iyo shaqo ayaa sharciga waxaa la siiyay tiro gaaraysa 109 000 qof.
Tirada Soomaalida iska dhiibtay wadanka ayaan la shaacin balse waxaa hubaal ah in ay hoos u dhacday tirada Soomaalida, qaasatan kuwa sharciga la siiyay maadaama ay Laanta Socdaalka bilaabeen in ay ka aamusaan Soomaalida.
maxaa sababi karo ina somalida laga amuso ?
Muuse biixi says:
Somali laga aamusay majiraan ee jimcaale Ayaa somalida elergic ku ah oo hadal xun ka sheega xili walba si u Webside kiisa xiiso uyeesho
Fikrad aan lala dhicin 4 13
Waxa sabay in laga aamuso soomalida Waxa yimid swedan taliyaha laanta socdaalka ee somalia oo u sheegay in somalia ay nabad tahay qaasatan muqdisho
asc ugu horey yaanan leys dhaleeceyn wabsaada waa mid dan noogu jirto dan anoo dhan jimcaale wuxuu noo sheegay wixii jiray hady ku anfacday waa ok hadii kale …….
Waa wadan aay shaqadiisa iska adag tahay dadkiisana xer xeran marka meel ka qeer roon Allaha inoo saqiro dhul gaalo faa’ido malahan daruuf ayaa na wada keentay wadankeena Allaha inoo toosiyo insha Allah
Sharcigii kumeer gaarka ahaa ee 3sano cid la siiyey MA jirtaa
Jimcaale masuul sare ajir iyo xasanaad alle hasiiyo waad kumahadsantahay juhdigaada waxmagaratada warkooda ha qiimeynin
Waa sax jimcaale dad laga aamusay weey jirtaa anigaa la iga aamusnaa sanad iyo lix bil shalay ayeeyna negativ i siiyeen sababtana ma aqaano marka dadka iska hadlaayo ayagoo waxba ogeen iska aamusa jimcaale wuu niiga xog ogaalsanyahay
Maskiin sxp Allah hakuu gar gaaro sabarka badi
Walal cali intan lagu didin maqa interfiyu aya martay
Asw walaal ali sabir anigaa sanad ayaa la iga aamusnaa hadeey isoo direen balan ay leeyihiin waa dhameeystir kiis kaagii ah kaalay . Kombletterar qof ay usoo direen majiraa allah amuurah sahlo dhamaanteenba
illaahey ha ufududeeyo walaalkey ani illaahey wuu iiga gargaaray migrationka waana lay ogolaaday ilmaheeygi